Induction Annealing Brass Bullet Shells Kuchenesa Kurapa
Induction Annealing Brass Bullet Shells Kuchenesa Kurapa UHF Series Ine Induction Heating System
Yekushandisa Ziva Chinangwa:
A manufacturer yendarira bara mabara matemhe anoda simudzira yavo iripo induction heating equipment uye iri kutsvaga kuvandudzwa kwekuita. The goal yemuedzo uyu wekushandisa ndeye kuratidza kuti DW-UHF-6KW-III induction system ichasangana uye inopfuura zvido zvayo pakuzadzisa yakagadziridzwa kupisa nguva uye kuchengetedza kupisa kwakaenzana mukati medzimbo yakanangwa. Two sizes of nendarira zvombo makanda akashandiswa pakuyedzwa - bullet casings ne 1.682 " (42.7 mamirimita) Kureba uye 0.929" (23.5 Mm) Kureba. Nguva yakatarwa yekuwedzera is 0.6 masekondi kune ese mativi kushandisa imwe induction kudziyisa coil.
HLQ DW-UHF-6kW-III mhepo-yakatonhora induction heat maitiro was kushandiswa mukuwedzera chiito. Tempilaq penda anga ajaira ona kana zvichidikanwa tembiricha munzvimbo yakafukidzwa inosvika.
Iwo mabhuru endarira aive akaiswa mukati induction heat coil. Iyo nzvimbo inofanirwa kubviswa took inenge 60% yehurefu hwechikamu ichiverenga kubva kumagumo ekuvhura. The nzvimbo inopisa yainge yakapendwa ne Tempilaq izvo zvinobatsiraed us ongorora tembiricha kugova. Mativi ese ari maviri akabudirira kusvika patembiricha yechinangwa of 750 °F (398° C) muna 0.6sec. Nekuti ari chidiki chikamu, simba rekupa magetsi rakadzikiswa kusvika pa45% kudzivirira ari chikamu chiri kupisa.
Kazhinji, chikuru chinangwa chekupinza kupisa kupisa kupisa simbi, kugadzirisa patsva masimbi esimbi kana kungobvisa kusagadzikana kwemukati.
Inonyanya kuve nekupisa kusvika pakuwedzera tembiricha (800ºC uye 950ºC zvichienderana nerudzi rwesimbi), zvichiteverwa nekunonoka kutonhora.
Induction Annealing inzira yekupisa yekupisa iyo inosanganisira kupisa kwezvinhu pamusoro peyake tembiricha yekudzokesa. Chinangwa ndechekusvika nekuchengetedza yakaringana tembiricha yenguva yakaringana ichiteverwa neyakakodzera kutonhora. Iyo inowanzo shandiswa mukugadzira simbi uye nesainzi yezvinhu kuita kuti iyo yakarapwa sampuro inyatso shanda nekuderedza kuomarara kwayo uye nekuwedzera kwayo ductility (kugona kuita shanduko yefomu pasina kutyora).
Annealing inoshandura iyo yepanyama uye dzimwe nguva makemikari zvivakwa zvacho sekudzokororazve kunowanikwa panguva yekutonhora. Naizvozvo, zvivakwa zviri kubuda zvemakoko akawanda, kusanganisira kabhoni simbi, zvese zviri zviviri zvinoenderana nekupisa uye nehuremu hwekutonhora. Feri simbi, senge simbi, inoda kunonoka kutonhora kuti iwedzere. Zvimwe zvinoshandiswa (semuenzaniso mhangura, sirivheri) zvinogona kutonhodzwa zvishoma nezvishoma mumhepo kana kukurumidza kudzimwa mumvura.
Induction Heating inopa kuvandudza kudzora kweannealing maitiro. Dzokororo inodziya profiles inogona kuwanikwa nyore nekunyatso kudzora kwesimba rekupisa. Sezvo iyo workpiece inodziya zvakananga neiyo magnetic field, mhinduro inokurumidza inogona kuwanikwa. Zvakare, iko kwepamusoro kushanda kweiyo induction kupisa maitiro kwakakosha pakurapa kwakadai kwenguva refu.
Zvichienzaniswa nedzakawanda nzira dzakajairika, kuburitswa kwenyowani yakachena uye yakapusa kushandisa, nzira isingataurike inopa yakakwira mhando yeanorapwa ekushanda.
Induction inodziya kudziyisa zvakanakira:
Yakagadziriswa mumutsara nekutonga kweparamende munguva chaiyo
Mhedzisiro yemetallurgia yakafanana neiya inowanikwa mumaovheni akajairwa
Pasina kusvibiswa kwezvakatipoteredza
Wedzera simba remagetsi
Yakaderedzwa yekugadzirisa nguva
Kugona kudzora kupisa, kunyatso tembiricha
Kugona kupisa nzvimbo diki pasina kushandura hunhu hwechimwe chikamu
Kutenderera kwakanaka uye kunodzokorora kupisa
Kuderedzwa kwepasi oxidation
Yakagadziridzwa nharaunda yebasa
Mamwe maindasitiri ane hukama ipombi nenyere, mushonga, mafuta uye gasi uye mota.
Categories Technologies Tags annealing, indarira, kubatanidza ndarira bara bara, Kuwedzeredza Brass Bullet Shells, zvinomisikidza ndarira induction, kubatanidza gorosi yeganda, annealing yendarira shell induction hita, annealing bullet shells induction, tenga induction yekubvisa hita, induction annealing, induction inosimbisa ndarira, induction inovhara ndarira mateko, induction inovhara makomba Post navigation